Jirichaa ahịa inbound gị dị elu karịa nke a | Martech Zone
Jirichaa ahịa inbound gị dị elu karịa nke a
Tuesday, January 16, 2018 Fraịde, Jenụwarị 19, 2018 Douglas Karr
Anyị emeela ihe zuru ezu nyocha na ahia ahia n’oge gara aga nke a na-elekwasị anya na ndị na-ajụ ase dị iche iche, ọwa, na atụmatụ dị iche iche ị kwesịrị iwepụta maka ihe ngosi zuru ezu inbound ahịa atụmatụ. Mana ọ bụghị usoro inbound ahịa niile dị ka ijide ma gbanwee ndu na saịtị. Nke a infographic si Digital Marketing Philippines bụ a keukwu anya na edu ọgbọ elebara anya n'ahịa ahia ahia.
Mgbe ahia akpaaka software doro anya okpukpu abụọ nke ohere nke ndị na-ere ahịa iji mepụta ihe ka mma na-eduga, na okpukpu abụọ dị irè karị na-ekwurịta okwu na atụmanya ha, enwere ihe ndị dị mkpa na ndị na-ere ahịa agaghị eleghara anya iji hụ na atụmatụ ha na mbọ ha ga-abịa. Ọ bụrụ n ’ị na-eme atụmatụ ibido mkpọsa ọgbọ nke inbound n’afọ a, mgbe ahụ ọ bụ nnukwu oge iji mara ihe ndị a. Jomer Gregorio, Digital Marketing Philippines
Ihe omuma ahu na akowa uzo abuo nke uzo ndi n’ahia ahia di iche iche nwere ike isi bulie mbọ ndi ndu ha:
Kpebie nke gị ebumnuche na ebumnuche.
Chepụta nke ukwuu mbido peeji nke.
Mee ihe nko ma obu ihe ndi ozo.
ịzụlite ozi email na-enyere gị aka ịkwọ ụgbọala na atụmanya njem.
Capture na-eduga na okporo ụzọ.
Leadsgbọala na-eduga site na ozi mgbasa ozi.
Bido chegharia mgbasa ozi ịgbaso na ịdọta ndị ọbịa hapụrụ.
ịzụlite email nurturing mkpọsa.
Tags: mgbasa oziọwadigital marketingdijitalụ ahịa dijitalụakpaaka emailemail foneeluemail Marketingemail na-azụliteemail nurturing mkpọsankoinbound mgbaru ọsọebumnuche inboundmbido peeji nkeedu ọgbọduru ndọtachegharia mgbasa oziokporo ụzọ
Douglas Karr Tuesday, January 16, 2018 Friday, January 19, 2018
JARVEE: Windows-Dabere Social Media akpaaka Software.
Enwere Oge Karịrị Mwepụta nke Ọhụrụ Social Network?